Review phim Lật Mặt 48H và hành trình trở thành Series hút khách của Lý Hải | Muasalebang - Muasalebang
Review phim Lật Mặt 48H và hành trình trở thành Series hút khách của Lý Hải | Muasalebang
Đang Đọc: Review phim Lật Mặt 48H và hành trình trở thành Series hút khách của Lý Hải | Muasalebang in Muasalebang
I-MoMo wallet ingathanda ukuletha isibuyekezo se-movie Flip Face: 48H ngemva kwezinsuku ezi-2 zokuhlolwa okukhethekile nokuthola “imvula” yezincomo ezivela ezithamelini. Okunye ukujaha okuqine kakhulu esikrinini sase-Vietnamese kudalwe kabusha nge-Flip Face: 48H, okwenza noma yimuphi umlandeli we-movie athakasele. Le filimu isize uchungechunge lwe-Flip Face ukuthi lukhuphule ukuphakama okusha ngempela, Ake sithole ukuthi yiziphi izinto u-Ly Hai kanye nethimba abasilethele zona ngalesi sikhathi!
UHLELO LWEFILM SHOW NAMUHLA
Thola umbukiso wemuvi omuhle namuhla ngentengo ekhethekile ku-MoMo.
1 Phenya 5:48H (2021)
2 Phenya Ubuso 1 (2015)
3 Phenya Uhlangothi 2: Isethi Yefilimu (2016)
4 Flip Face 3: Amadoda Amathathu Akhubazekile (2018)
5 Phenya 4: Indlu Nezivakashi (2019)
Phenya 5:48H (2021)
I-Flip Face 5: 48H iwukujaha nokuphishekela iqembu lezigebengu ukuze liphinde lithole umcebo we-Ky Nam ongandile noyigugu (ngaphezu kwamadola ayizigidi ezimbili). Umlingiswa oyinhloko nguHien – owayengumshayisibhakela nomkakhe nendodakazi yakhe. U-Hien uzithola ejahwa nesigebengu u-A Din ngemva kokuthatha into yakhe eyigugu. I-Din inezinsuku ezingu-2 noma amahora angu-48 ukuze ibuyisele into kumdondoshiya oyithengile. Ngenkathi ebaleka futhi evikela umndeni wakhe omncane, u-Hien kwadingeka athathe umkakhe nezingane ukuba abalekele e-West River ngosizo lomngane odlalwa u-Mac Van Khoa no-Le Ha Anh.
Iphosta esemthethweni ye-Flip Face: 48H.
Ifilimu iwuchungechunge lwefilimu yesenzo esimsulwa, ngakho-ke kuzomele nakanjani ihwebe ngeskripthi esilula nesiqondakala kalula, sigxile kuzo zonke izisetshenziswa ezigcawini zesenzo ukuze kudalwe ubuhle kanye nokuqeda imonotony yombhalo.
I-Flip Face: I-48H yenze umsebenzi omuhle ngale ndaba, zisuka nje, ababukeli babe nezikhathi zokujaha okukhulu, isenzo esiwujuqu nesinamandla sabalingiswa. Amashothi aphakathi nendawo ukuya kwavala anomnyakazo ohamba kancane ohamba phambili akhombisa wonke umbono nomdlandla ka-Ly Hai kanye neqembu lefilimu.
Akukhona nje ukujaha nokulwa okungenangqondo, ekujaheni kuyo yonke ifilimu kuzosisiza sibone ngaphakathi ukuthi uthando lwendoda nomfazi, umzali nengane, ubungane babangane abaseduze, ngisho nabo bangabantu abanomusa kodwa abangazi. Imininingwane emincane idale i-Flip Face 5: 48H enomuzwa wansuku zonke futhi waseNtshonalanga kakhulu.
Le filimu ikhombisa uthando olungenamkhawulo lukaHien ngomkakhe nezingane.
Kuyancomeka lokho, kodwa lisekhona iphuzu okumele ligxekwe, okuyisikhohlakali. Umlingiswa u-A Din akacaci ngemvelaphi yakhe nezisusa zakhe. Ngisho nasekupheleni isisusa sembulwa kodwa silula kakhulu futhi kulula. Imininingwane eminingi ibonakala ingenacala, ayisizi ifilimu iyonke. Kodwa-ke, lena ifilimu yesenzo futhi ngokuvamile okuqukethwe kwalolu chungechunge kukhululekile futhi kulula, ngoba ukukhanga kwakho kulele esenzweni sefilimu. Nakuba i-Flip Face: 48H isenamagrit ambalwa amancane, kodwa iwuhlamvu oluncane lwesihlabathi uma luqhathaniswa nayo yonke ikhwalithi yefilimu.
I-Flip Face 5: 48H ihlanganisa abalingisi bekhwalithi ephezulu ngokufanele mayelana nokulingisa esikhundleni se-virality, ngakho ukujikeleza komlingiswa ngamunye akunakugwenywa. Konke kuhamba kahle ngesisho esimangalisayo esingenakuphikiswa.
U-Vo Thanh Tam akakabuyi isikhathi eside, uletha uchungechunge lwezenzo ezidonsa amehlo ngokwedlulele kanye nezigcawu ze-karate, ezinokuhlangenwe nakho okuningi kumafilimu angaphambilini, ngakho-ke le ndima ibonakala iyisidlo esenziwe ngomumo, ekuqaleni. wazalwa okokuqala ngenxa yakho.
I-Martial arts ingamandla kanye nenzuzo ye-Vo Thanh Tam.
Ngokuqondene no-Oc Thanh Van, udlala indima yomfazi othanda umyeni wakhe nomama othanda izingane zakhe. Ngemva kwezimpi, mhlawumbe ukudlala kuka-Oc Thanh Van yikho izethameli ezizozikhumbula unomphela ngemva kokushiya imidlalo yeshashalazi.
Zama njalo ukuvikela umyeni wakho ngawo wonke amandla akhe ezitheni eziyingozi nakuba elimele.
Abalingisi abasekelayo nabo benziwe kahle kakhulu. UMac Van Khoa njengo “comedian” udala ikhefu kule filimu, kodwa kulokhu ubelokhu ezibambe kakhulu engxenyeni edlule, ngakho akasazizwa ecindezelekile. U-Huynh Dong naye uhlakaniphe kakhulu njengesikhohlakali esinonya, esikhohlakele, oyindoda enamaqhinga amaningi, hhayi indoda ekwazi ukulwa kuphela.
Ukuhlangana nezimo ezicindezelayo yizikhathi zokuthula okukhulu.
I-Flip Face: I-48H ifilimu eyenza kahle ngokwezinto ezibonakalayo kanye nezenzo, ebonisa ubuqotho nombono ka-Ly Hai emsebenzini wakhe. Kodwa naphezu kokwenza kahle ngokwezithombe ukuletha ukuzijabulisa kubabukeli, indaba yomndeni nokusondelana ayisajulile futhi ithinta inhliziyo njengazo zonke izingxenye zangaphambili. I-elementi ethi “Flip Face” nayo ayisamangazi futhi iphukile, umjikelezo wefilimu umugqa futhi ugeleza uqonde ekugcineni njengawo wonke amanye ama-movie, isiphetho sijabulisa kakhulu futhi siyabikezela.
Indawo lapho imoto ikhukhuleka khona isuka esikebheni futhi umshayeli esindisa intombazane elimele ibonakala ihlukene nokugeleza kwefilimu.
Kodwa lokhu kuhwebelana kuyakufanelekela ngoba amafilimu aseHollywood enza okufanayo, awagxili ngokwengqondo kuphela esenzweni nasezilungiselelweni ezinhle. Kodwa uma senza ukuguqulwa kwengqondo komlingiswa odlalwa nguQuach Ngoc Tuyen kucace futhi sisuse ingxenye ye-“Joker” yomunye u-villain, i-movie izoba ngcono kakhulu.
Ifilimu yanele ukujabulisa abangani nomndeni, ngaphezu kwalokho, kunezimo eziningi zokuzijabulisa ezifana namaqanda e-easter avela ku-Life With You ka-Ly Hai. Labo abamthandayo ngesikhathi sika-Ly Hai emakethe yomculo yase-Vietnamese bazothinteka kakhulu, futhi lawa ‘maqanda ePhasika’ aphinde akhumbule ubuntwana babantu abaningi ababenamadiski athengiswa esitolo.igilosa yasemaphandleni.
Ake sibheke uchungechunge lwangaphambilini lwe-Flip Faces yomqondisi u-Ly Hai nge-MoMo wallet!
Phenya Ubuso 1 (2015)
Lena ifilimu yokuqala ukuqala uchungechunge lwe-Flip Face futhi imuvi nayo ingokoqobo kakhulu. Kusetshenziswa ukugeleza kwefilimu okungewona umugqa nezigcawu ezihlukanisayo mayelana nomlingiswa oyinhloko, indaba kancane kancane iyavela ngaphandle kokubangela ukudideka ezithamelini.
Iphosta esemthethweni ye-Flip Face yokuqala.
I-Flip Face 2015 ayikwazi ukuhluleka ukusho ukuvelela “komshayeli wetekisi wesithuthuthu” ka-Truong Giang, ubuhle bakhe ekulingiseni nasemigqeni yemfashini ngaleso sikhathi. UTruong Giang isikhathi sokuphumula ngemuva kokugijima nokujaha isigqi kuyo yonke ifilimu, uphinde abe yisici esivumelanisa ukuthula okuthulile okuvela kumlingiswa oyinhloko odlalwa u-Ly Hai.
Xem Thêm Bom tấn hay nhất về Spider-Man từ trước tới nay! | Muasalebang
Ungumshayeli wetekisi ophucuzekile futhi onesizotha ovela kuFlip Face.
Ifilimu iqukethe ukuphenduka okungalindelekile, njengesihloko sefilimu ephenduphendukayo ngayinye ngaphandle kokungabaza, okudala isithombe esinamandla enhliziyweni yezethameli. Ngenxa yokuthi ifilimu yokuqala, ukufiphala akunakugwenywa, isenzo sihle, isigameko sifanelekile, kodwa imininingwane isewumbudane noma ayikwazi ukuchazwa ngokugculisayo. Ngokuvamile, i-Flip Face ngo-2015 yaba yimpumelelo enkulu ku-Ly Hai ikakhulukazi kanye ne-cinema yase-Vietnamese, ngaphandle kokubukisa kakhulu, ngokutshalwa kwezimali okunomdlandla kanye nezigaba zokuhlela nokuqopha, okungenise imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-75. .
Phenya Uhlangothi 2: Isethi Yefilimu (2016)
Impumelelo yengxenye yokuqala izobe ilindelwe kakhulu. Emuva ku-Flip Face 2: Isitudiyo Sefilimu, u-Ly Hai usadlala indima eyinhloko kodwa uqukethe imilayezo eyengeziwe mayelana nokwenza ifilimu.
Iphosta esemthethweni ye-Flip Face 2: Isitudiyo Se-Movie.
I-Cascadeur kanye nomqondisi, abantu abalandela i-aura yefilimu ephumelelayo. Ukuzinikela kwabo buthule kunzima ukukubona, konke kuzogxila ezinkanyezini ngqo esikrinini. Kodwa yini eyenza baqhubeke naphezu kwabo bonke ubunzima? Yintshisekelo kanye nenhliziyo ngomsebenzi ongabavumeli ukuthi bayeke.
Kubonakala sengathi u-Ly Hai naye ufuna ukuqinisekisa uhlobo lwe-Flip Face lapho umqondisi odlalwa u-Quoc Thuan ehlala ekhuluma ngamagama amabili ikhwalithi kanye nokuqukethwe kwefilimu kufanele kuze kuqala. Lesi isikhumbuzo esincane emakethe yamafilimu yase-Vietnamese ukuthi okuqukethwe akusho lutho noma ufuna ukukhumbuza ukuthi i-Flip Face ihlale itshalwe ngokucophelela nangokucophelela.
Isenzo esinegazi nokwethembeka sigqamile ku-Flip Face 2.
I-elementi yesenzo ku-Flip Face 2 ihlala ifana nengxenye yokuqala. Uma u-Ly Hai edlala indawo emaphakathi nendaba, u-Hua Minh Dat kuzoba nguye ozosiza izethameli zihleke ngemva kwezikhathi ezishube kakhulu. Uphinde abe yisici esinciphisa ukungathí sina komfowabo, uLy Hai, oke abe yimpumputhe.
Ngaphandle kwalokho, ifilimu iphinde ikhombise ukuba khona kobuso obusha endaweni yamafilimu, i-Kha Ngan. Nakuba ivela kuphela ezingxenyeni ezincane ezimbalwa, isashiya umbono ojulile ezinhliziyweni zababukeli. I-Flip Face 2 iphinde ifakazele isiqubulo sika-Ly Hai sokuthi imuvi kumele ibe nekhwalithi efanayo nabalingisi abaqinile, hhayi amagama amakhulu, kodwa imuvi ayiyi ndawo!
Flip Face 3: Amadoda Amathathu Akhubazekile (2018)
Kule ngxenye yesithathu, u-Ly Hai akasayidlali indima yesikhungo sendaba, isici sesenzo sibuye sishiywe, kunalokho kuyindaba ebonisa iqiniso lamanje lamanethiwekhi omphakathi. ULy Hai uphinde wagxila emaqhingeni okubamba izihloko zokubamba imibono naphezu kobuntu bezingxenye ezithile zenkampani yabezindaba njengendlela yokwenza imali ngokusekelwe ekuthembekeni kwabanye.
Iphosta esemthethweni Flip Face: Abafana Abathathu Abanephutha.
Indaba eqanjiwe iphathelene nabafana abangu-3 abanokukhubazeka kusukela ebuntwaneni edlalwa u-Kieu Minh Tuan (okhubazekile), u-Huy Tuan (oyimpumputhe), u-Song Luan (oyisimungulu nesithulu). Bobathathu babeyizintandane besebancane, ngenhlanhla balandwa nguMama Tu, kamuva wafunda umsebenzi wokuthengisa ubhanana obhakiwe wabe esevula isitolo.Ngenkathi ye-4.0 izinkundla zokuxhumana zathatha isihlalo sobukhosi, ngakho kungazelelwe isitolo saduma kakhulu. Lokhu kuphinde kube “yisiyebo” esinonile sezinkampani zemidiya ukuthi zigxume ngaphandle kokuhle nokubi zihlanekezela iqiniso.
Xem Thêm Top 10 phim Zombie (xác sống) hay nhất trên màn ảnh | Muasalebang
Uhambo lwabafana abathathu lwaletha uhleko olukhulu, kanye nezifundo eziningi zempilo ezithakazelisayo nezinethemba. Umlingiswa ka-Kieu Minh Tuan uthe ukutsheka kancane kodwa unenhloso ecacile, umlingisi ka-Huy Khanh udlala indawo yomfowethu omdala ngezeluleko nesikhuthazo kuwo wonke amalungu asele. U-Song Luan udlale indima yokwengeza umbala kuphela nge-NeNe ngoba bobabili babenolwazi lokulingisa olubuthakathaka.
U-Huy Khanh no-Kieu Minh Tuan bayimiphefumulo yayo yonke ifilimu.
Ngomzuzu wokugcina, cishe wonke umuntu uzoshaywa umoya wumzwelo olethwa yile filimu, nokuyinto emangaze izethameli ngoba bezicabanga ukuthi lena ifilimu yokuzijabulisa nje edala uhleko. Izinyembezi ziyozehlela, iqiniso liyavela futhi uthando lukamama luhlala luyinto engeke ibekwe ngamazwi. Yilokho uFlip Face 3 afuna ukukudlulisela kuwo wonke umuntu.
Phenya 4: Indlu Nezivakashi (2019)
Ayiselona ihlaya nje, i-House With Guests iletha uhlobo olusha lokuthusayo oluxubene namahlaya. Isigaba se-action naso asizange sibonakale, esikhundleni salokho kube nokuthuthumela okumangalisayo namahlaya ahlanyayo kaMac Van Khoa. Uyena futhi okhanya kakhulu kule ngxenye yesi-4 yeFlip Face.
Iphosta esemthethweni ye-Flip Face: House With Guests.
Flip Faces: Indlu Yezivakashi izungeza iqembu labangane abangochwepheshe bokuthwebula izithombe zomshado okuhlanganisa uThong (Huy Khanh), Phuong (Mac Van Khoa), Binh (Hoang Meo), Vy (Katleen Phan Vo) kanye nesithandwa sentombazane u-Huan (Jay ).Ibutho). Ngesikhathi esisodwa ukuze litholele izivakashi umongo, leli qembu lathatha ithuba lokuvakashela idolobha lakubo ka-Vy endaweni eyizintaba ehlane futhi engaqondakali. Le ndlu ihlale iveza ukubukeka kabi ngemicimbi ye-macabre eyenza wonke umuntu asole ukuthi umfowabo omncane u-Hoang (Tien Ngo) ushonile. Kodwa lokho umcabango nje, i-twist yokugcina enhle kakhulu kanye ne-top-notch cameo ka-Ly Hai yikona okuvelele kuyo yonke i-movie.
Ubuso obuthathu obufanele “ukuthumela igolide” lwabo bonke Flip Face: House With Guests.
Itulo lifana nefilimu yaseThailand eshisa izikhotha, kodwa umyalezo wothando kamama kufilimu uwumgomo oyinhloko. Iqhubeka isuka ku-part 3, kulokhu izinyembezi zincishwe kakhulu ngemva kokwethuka okukhulu okunemibala emnyama. Akekho umuntu okuthanda ukwedlula umama wakho hlala nomndeni wakho ngesikhathi usakwazi, yilokho ithimba lamafilimu elifuna ukutshela ababukeli.
Abalingisi kulokhu banobuso obusha njengoKatleen Phan Vo kanye noJay Quan, kodwa mhlawumbe okugqamayo kule ngxenye yesi-4 kungokukaMac Van Khoa, usomahlaya wabantu we-Flip Face 4 naye uyingxenye yokuqala abambe iqhaza kuyo. le “universe”.
Imilayezo edluliswa wuchungechunge lwe-Flip Face izophila phakade ezinhliziyweni zabalandeli. I-MoMo wallet nayo iyakuthokozela ukuletha isikhathi sombukiso esigcwele sengxenye yakamuva, Flip Face: 48H. Noma iyiphi ithiyetha oyithandayo i-MoMo Wallet inayo, kusukela ku-CGV Cinema noma i-Galaxy Cinema, iLotte Cinema, BHD Star,… Vula i-MoMo Wallet bese ukhetha Flip Face: 48H ! Thenga amathikithi manje noma uzophuthelwa imuvi emnandi!
3 Cách Chụp Màn Hình Samsung A21S ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG | Muasalebang
Mẹo chặn cuộc gọi cho mạng Mobifone | Muasalebang